राष्ट्रपति समक्ष पाँच देशका राजदूतले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र
पाँच देशका राजदूतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् । सिंगापुर, न्युजिल्याण्ड, होली सी, टर्की र रोमानियाका राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
बुधबार, मंसिर ८, २०७८ ९:५५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। पाँच देशका राजदूतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् । सिंगापुर, न्युजिल्याण्ड, होली सी, टर्की र रोमानियाका राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
उक्त अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो । पाँच देशका राजदूतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।
सिंगापुर, न्युजिल्याण्ड, होली सी, टर्की र रोमानियाका राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । उक्त अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।